Golaha Aqalka Sare oo u yeeray Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Golaha Aqalka Sare oo u yeeray Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya
Xildhibaannada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa Maanta oo Talaado ah ay Magaalada muqdisho ku yeelanayaan kulankoodii caadiga ahaa kaas oo shalay uu dib uga dhacay.
Xildhibaannnada Aqalka sare ayaa xalay waxaa lagu wargeliyey in uu jiro Kulanka Aqalka Sare,isla markaana looga baahan yahay Xubnaha inay kasoo qeyb galaan.
Ajandaha Kulanka Maanta ee Golaha Aqalka Sare ayaa waxaa uu yahay Akhrinta labaad ee Hindise sharciyeedka canshuuraha Furdooyinka iyo akrinta sedexaad ee wax ka badalka sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka,waxaana kulanka goobjoog ka noqon doono Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
Shaly oo Isniin aheyd ayaa qorshuhu ahaa in uu Wasiirka hortago Xildhibaannada Aqalka Sare,hayeeshee uu kulanka baaqday sababo la xiriira Wasiirka oo ka qyeb galay Kulan ay lahaayeen Xildhibaannada Golaha Shacabka.
Dowladda oo 30 Sano kadib dib u furtay machadkeeda diblomaasiyadda